I-Crypto Exchange FTX Iqalisa Amabili Ama-Bitcoin Wamasheya E-Wall Street NjengoTesla, i-Apple, i-Amazon | ICoinGenius Host Host Virtual Crypto Umcimbi
Ukushintshaniswa kwe-Crypto derivatives FTX kuzonikeza abathengisi be-cryptocurrency ithuba lokuhweba ngamasheya wethokheni ezinkampani ezinkulu ezifana ne-Apple Inc. ne-Amazon. Izitoko ezibizwa ngama-fractional kungekudala zizotholakala emsamo wenkampani.
Ukwabiwa Kwamathokheni Kwamanye Okukhulu Kakhulu
Ngomunye umbiko wamuva, I-FTX izosebenzisana nenkampani yezezimali yaseJalimane i-CM Equity AG kanye neSwitzerland-based Digital Assets AG. Ukubambisana kuhlose ukunikeza abathengisi amasheya abizwa ngama-fractional - cishe amashumi amabili nambili amasheya / ama-crypto azodayiswa kungxenyekazi ye-FTX.
Ngokuhambisana nezengezo ezifana ne-Apple Inc. ne-Amazon, uhlu lwamasheya enkampani lubandakanya iNetflix Inc., i-Facebook Inc., iTesla Inc., kanye ne-SPDR S & P 500 esikhwameni esidayiswa ngokushintshaniswa.
Ngokusho kombiko wezindaba, lesi sinyathelo se-FTX siyingxenye yesifiso esikhulu kakhulu esiya embonini ye-cryptocurrency yokwandisa ukufakwa kuhlu kwamathokheni okuphepha.
Kubikwa ukuthi izengezo ezintsha zamathokheni zizobhekisa kubatshalizimali abakuthola kunzima noma kungaphazamisi ukufinyelela amasheya ahlukahlukene ngezimakethe zendabuko.
USam Bankman-Fried, isikhulu esiphezulu se-FTX, uthe:
"Kubantu abaningi, kuyinkinga" ukufinyelela amasheya. Kunezindlela zokwenza, kepha bazizwa bekhulile kakhulu futhi benamahloni. Ukunikeza abantu ukufinyelela kunwebisa ukuthi yini ongayidayisa. ”
Ubuye wengeza ukuthi amathokheni aziphatha njengokufana nerisidi yediphozithi noma isikhwama esidayiswa ngokushintshaniswa (ETF). Abatshalizimali bangabathengisa ku-FTX kepha kuzodingeka babakhiphe ngenxa yokuphepha okuyisisekelo nge-CM Equity, ephethe ukuphepha kwangempela.
Kubikwa ukuthi, ngeke kube nezimali zokuphatha zokubamba amathokheni. Imali yokuhweba izohlala, noma kunjalo. Ukwethulwa kwalolu hlelo kuzoqala ukusebenza ngemuva nje kokuqala kokubhaliswa ngoLwesine. Abahwebi base-US nakwamanye ama-FTX Iziphetho ezinemikhawulo ngeke ikwazi ukuhweba amathokheni asanda kufakwa.
Ukuletha Amathuba Ehlukene Okuhweba
I-FTX yaziwa ngokwethula imikhiqizo ehluke kakhulu kunaleyo ekuhwebaneni okwendabuko kwe-cryptocurrency. Kwakungenye yezindawo zokuqala ukwethula inkomba kuzinhlamvu zemali ezingashintshiwe emuva lapho i-DeFi boom yayikulaka lonke emakethe ye-crypto.
As I-CryptoPotato kubika, muva nje, inkampani yethule inkomba yekusasa engashintshiwe ehlanganisa amachibi aphezulu ayi-100 kungxenyekazi engashintshiwe. Tuphrojekthi wathembisa abathengisi ukuthi basebenzise ukushintshaniswa kwempahla yendabuko yedijithali ukufinyelela ezimakethe ngeplatifomu yokuhweba esezingeni eliphansi.
Izihloko ezihlobene:AIAmazonAppleapple incimpahlaizimpahlaBitcoinblockchainukhesheCeoIzinhlamvu zemaliIzinkampanicryptoI-Crypto ExchangeImakethe ye-CryptocryptocurrencyIzimali Zokushintshana Kwe-CryptocurrencyUmkhakha we-CryptocurrencyehloniphekileDefiOkususwayookuphuma phambilidigitalImpahla YedijithaliIzimpahla ZedijithaliukulinganaetfukushintshanisaUkuhwebelanaFacebookIzimalizezimaliI-ftxisikhwamaikusasaenikezaUkubambaIndustryAbatshalizimaliUqaliseListingsMarketMarketsNetflixnewIzindabaONEithubaAbantuplatformPoolsImikhiqizoI-S&P 500izibambisoithokheni yezokuphephanokuvikelekashareukwabelanaUxhasiweAmasheya NamaTeslaIthokheniAmadokhumentitopUkuhwebakuthengiswaabahwebiUkuhwebaindawo yokuhwebaUSuniswapUSDTWall StreetWHO